‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने तयारी Bizshala -
‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने तयारी
काठमाण्डौ । बीमासम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरु अहिले पनि सक्रिय रहेका छन्।
कोभिड–१९ को जोखिमका बीच भौतिक दूरी कायम राखेर समितिले दफावार छलफल चलाइरहेको छ। ‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई समेत बोलाएर राय व्यक्त गरिरहेका छन्।
बीमा व्यवसायलाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी, नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक बनाउन बीमासम्बन्धी कानूनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो। ‘बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बीमा समितिलाई खारेज गरेर बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने कुरामा सांसदहरूको जोड छ। परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ र यो नियमनकारी निकाय हुनेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणले काम गर्दा कतिपय प्रावधानमाथि सांसदहरुले फरक मत राखेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई प्राधिकरणलाई स्वायत्त नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
हाल बीमा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छ। त्यसलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन नै हो। बीमा क्षेत्रको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ।
विधेयकको परिच्छेद–२ को दफा ५ मा प्राधिकरण नेपाल सरकारको सल्लाहकारका रूपमा काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। बीमा कम्पनीहरु स्थापनाको स्वीकृति, नवीकरण, खारेजी, नियमन र सुपरीवेक्षणको काम प्राधिकरणको हुनेछ।
डा भट्टराई अहिको आवश्यकतानुसारको विधि व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण ल्याउन खोज्नु महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्। यद्यपि दफा ५ मा सरकारको सल्लाहकार मात्रै बनाइएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
डा भट्टराई ले दफा ७ को २ मा सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सके थप क्षमतावान व्यक्ति आउनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
हिजोको सार्वजनिक संस्थानको नियुक्त, गठन, अधिकार र कर्तव्यको विषयमा केही सुधार भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेकोतर्फ जोड दिँदै सांसदहरुले कानून बनाउँदै गरेको अवस्थामा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने बताउँछन्।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाबाट विसं २०७५ असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक दर्ता भएको आज दुई वर्ष बितिसकेको छ। यसको प्रस्तावनामा नै बीमा प्रणाली वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाई गुणस्तरीय बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बीमा व्यवसाय हतोत्साही नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने र नियमनलाई पनि चुस्त बनाउने गरी विधेयक पारित गर्नेतर्फ समिति अघि बढेको जानकारी दिए।
बीमा र पूँजी बजार पनि बैंकिङ क्षेत्रजस्तै महत्वपूर्ण भएकाले त्यहीअनुसार ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरुको मत छ। दफावार छलफल अझै केही दिन जारी रहनेछ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स : बीमाशुल्क आर्जनमा ८१.३४%को छलाङ,
काठमाण्डौ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क घट्यो, नाफा १५.३४%ले
एनएलजी इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लिलामी सेयरमा...
बीमा कम्पनीहरुले ५०% कर्मचारीलाई मात्र कार्यालयमा राख्न
काठमाण्डौ । मुलुकभर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै देशका सम्पूर्ण...
जनरल इन्स्योरेन्स : नाफा ३९.७७%ले बढ्यो, बीमाशुल्क आर्जन रु.
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७६/७७...
सानिमा लाइफ: बिमाशुल्क ९८.४२% ले बढ्यो, व्यवस्थापन खर्चमा पनि
काठमाण्डौ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो...
एशियन लाइफको नाफामा ७८.४३% को छलाङ, व्यवस्थापन खर्च घट्यो,
काठमाण्डौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो...
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको रु. ६३ करोडको आईपीओ भदौ ४ बाट
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले रु. ६३ करोड...